Umuntu akakwazi uhlala wedwa. Cishe zonke besikhathi sethu, khulula ebuthongweni, sixhumana nabangani abangabazi. Ngokuvamile, ngaphandle-ke, abantu nginqume impucuko wakhula, izinkinga ababa nazo zokuxhumana kuphakama. Nokho, uma kuziwa ukukhuluma nawe like intombazane, abameleli besilisa ngokuvamile bama msindo. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi ezinzima kangaka? Phela, kukhona izihloko eziningi ukuze zibe khona kungaxoxwa ngazo. Kodwa ngisho it has indoda ababefunde bagogoda owazi eziningi ezithakazelisayo, hhayi bancishwa amakhono oratorical, khuluma kaningi owesifazane akuyona ethe njo.
Zonke iphutha yokwesaba ukusho ukuthi kukhona okungahambi kahle futhi akha umbono ezimbi ngaye ngokwakhe. Ngenxa yalokho, it is impela kwakhiwa, kodwa hhayi ngenxa ibinzana okungalungile, kodwa ngenxa ukuthula aluhlaza cwe. Ngakho yini okufanele uyenze ezimweni ezinjalo? Kulula kabi - udinga ukukhuluma ngabo ulalele okushoyo yena (wesibili kubaluleke kakhulu). Awubalulekile besabe. Xoxa ukuthi ziqalise ngawodwana, kusukela amahloni kokuqala ziyophela. Futhi uma ungazi kanjani ukugcina ingxoxo ne intombazane ukuba ningabeki isikhubekiso yena abe umuntu omubi, eyalandela amathiphu alula futhi uma kukhona nice kuye, konke kuzolunga. Ukuqaphela yokuthi wena oyiwonawona, kuzokusiza azethembe.
Ngakho, into esemqoka engxoxweni - singadinwa nendlovukazi enganikanga nesithukuthezi wakhe. Phela, udinga ikuthinte omuhle ngawe, futhi ukuze ngifeze lokhu idinga ukuhlobanisa kuwe imizwa emnandi. Ngakho-ke, musa ukwenza ingxoxo le ngane inkulumo mayelana football noma izinhlelo C ++. Ngenxa yalezi zinjongo, une abangane.
Ungaqala ingxoxo ingxoxo elafika lutho uphoqa: isimo sezulu, ukuma kwenhliziyo, izindaba zakamuva, izifundo, njll Kodwa hhayi ugxile kulezi zihloko isikhathi eside. Bathi nje kudingeka ingxoxo. Khona-ke udinga ukubiza inzalo sentombazane. Ake sithi axoxa ngalokho unesithakazelo, ngisho noma bona ngokwabo abathandi lutho ngalo mqondo. Naphezu kwakho konke, ukukhombisa yabo, nakuba isithakazelo yokufakelwa, sidumise ke, yenza ukuba nginconywe mnene - konke lokhu kuzokusiza ukwakha isithombe esihle ngawe.
Uma kuziwa kuwe, noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi ungenawo akhononde, ngisho noma izinto zingasahambi kahle ayakhula. Kuyinto umkakho angase likuhawukele futhi basize futhi intombazane ezingajwayelekile kufanele sibone wena ubuntu namandla. Kodwa abayi kude kakhulu, futhi, wokuzibonga phambi ukuwa. Kungcono ukuqhuba ingxoxo le ngane ithoni isigamu-encokola. Xoxa ngawe nge amahlaya, ephapheme futhi kumnandi. Musa ngomkhumbi ke yonke imininingwane yomsebenzi noma besifundo sabo. Makahlale ngemva wenhlanganyelo umuzwa okulula imfihlakalo, uyeza kuwe, ngisho noma siphila somuntu ovamile kakhulu.
Ukukhuluma ngokuvamile kudingeka kwenziwe kuphela omuhle futhi ithoni kancane non-sina: aphikisane kanye nemizwelo emibi akufanele kube, ngisho noma ucabanga ukuthi imicabango yabantu bayo okungalungile. Ingxoxo nentombazane - lokhu ayikho indawo self-isiqinisekiso kanye protrusion ka "ukuzazisa" kwakhe, kungukungcola - i game ethokozisayo lapho umklomelo uzothola indawo yayo.
Nokho, isimo sishintshe kancane, uma ibanjwe ingxoxo intombazane ocingweni. Kulokhu, ngeke nengxenye ekuxhumaneni buthule, futhi ngenxa charm yakho kuso uyokwenza akunakwenzeka. Uma uhlangana intombazane isikhashana, kungcono ukusebenzisa ifoni kuphela ngenhloso eyodwa - ukuvumelana ngosuku entsha. Kuyefana nasendleleni zokuxhumana ku-inthanethi, okukunikeza amathuba ngisho ezimbalwa ukuze ubuyona. Shiya-Internet ukuze uthole ibhizinisi ukuxhumana kanye ophumayo, ekugcineni, usuku lwangempela. Futhi kukhona kakade Konke kuncike kuwe. Into esemqoka ukuba azethembe futhi akesabi. Believe me, ukuthi libhekana njengawe, nokuthi kufanele ukushaja umuzwa ezolile futhi uyamethemba amakhono abo siqu.
Yini kungaba, bebhala imizwa othandekayo
Ithoni Cream "Meybelin NGCONO Skin": Izibuyekezo ikhasimende
34 esibhedlela e Novosibirsk: isakhiwo kanye lempilakahle. Izithombe kanye nokubuyekeza